ကြိုက်ရာသီချင်းများ ၀င်တောင်းကြပါ အစုံတင်ပေးထားပါတယ် [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > .:::ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ:::. > သီချင်းများ > စိတ်ကြိုက်သီချင်းများ > ကြိုက်ရာသီချင်းများ ၀င်တောင်းကြပါ အစုံတင်ပေးထားပါတယ်
View Full Version : ကြိုက်ရာသီချင်းများ ၀င်တောင်းကြပါ အစုံတင်ပေးထားပါတယ်
သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ..ဒီပို့စ်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် သီချင်းအများကြီးပေးချင်လို့ပါ..တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က အကြိုက်မတူကြတော့ ကြိုက်ရာတောင်းဆိုလို့ရအောင်လို့ပါ..MP-3 ရော VCD သီချင်းတွေရောတင်ပေးသွားပါမယ်..ကြိုက်ရာကိုတောင်းဆိုကြပါ ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပေးပါမယ်..အခုရေးပေးထားတာကနေမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားလိုချင်တာရှိတာဆိုလဲ ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်များမှရော အားလုံးပူးပေါင်းပြီးကူညီကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်.ကျွန်တော်လဲအတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးသွားပါမယ်..ဒီထဲမှာမရှိသေးတဲ့သီချင်းများကိုလဲ ၀င်ပြီးရှယ်ပေးကြဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..ကျွန်တော်ကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါရစေ.ရေးထားတာတွေက တစ်ချို့စီးရီးတွေက ခေါင်းစဉ်ကိုတစ်ကယ်မသိလို့ အဆင်ပြေသလိုရေးထားတာအများကြီးပါ..သူငယ်ချင်းတို့အတွက်ပို့လိုက်ပြီဆိုရင်လဲ မှားယွင်းနိုင်မှုအားလုံးအတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ ကြိုတင်တောင်းပန်လိုပါတယ်..ကျွန်တော် စီးရီး(၁၅၀)နဲ့စဖွင့်လိုက်ပါတယ်..ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါ..အောက်မှာရွေးလိုက်ကြပါသူငယ်ချင်းတို့..ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေ..
၁။၀ိုင်ဝိုင်း-Unplugged ၁၁။ BigBag - အားလုံးအတွက်ပန့် ၂၁။ Iron Cross band ( 15th anniversary celebration ) ၃၁။ ကမ်းစပ်ကခြေရာများ ၂
၂။၀ိုင်ဝိုင်း-ကြိုးမဲ့စွန် ၁၂။ BigBag နှင့်ချစ်သုဝေ ၂၂။ Lဆိုင်းဇီ Selections ၃၂။ ကြယ်စင်မောင်နှမ
၃။၀ိုင်ဝိုင်း-လမင်းနှင့်ပင်လယ် ၁၃။ BigBag -ပန့်အကြောင်းမပြောနဲ့ ၂၃။ Lလွန်းဝါ-အချစ်မျက်ဝန်း ၃၃။ ကိုအောင်
၄။၀ိုင်ဝိုင်း-အချစ်ငှက် ၁၄။ BigBag-Happy Birthday ၂၄။ NGIIK-သူငယ်ချင်း ၃၄။ ချစ်စမ်းမောင်-ခြောက်ကြိုးကဝေ
၅။၀ိုင်ဝိုင်း-နေဆယ်စင်း ၁၅။ Black Hole ၂၅။ Nine Night ၃၅။ ချစ်သူထက်ပိုတဲ့သူငယ်ချင်း
၆။၀ိုင်းဝိုင်း-အချစ်ငှက် ၁၆။ City FM7၂၆။ oakar oo tar ၃၆။ ချစ်သူနားဆင်ဖို့=ကျား
၇။5 Into 2=1.Vol ၁၇။ DJ အာကာဘို ၂၇။ TOP TEN1 ၃၇။ ချစ်သူနားဆင်ဖို့=မ
၈။ANTIBIOTIC ၁၈။ Ezy FM ၂၈။ TOP TEN2၃၈။ ချစ်သုဝေ+ချစ်ဆုဝေ
၉။ Big5၁၉။ Heart ဂီတည ၂၉။ ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း ၃၉။ ချစ်သူတွေရေးတဲ့မှတ်တမ်း
၁၀။BigBag - ဗီလိန် ၂၀။ IMP - Living in normalize ၃၀။ ကမ်းစပ်ကခြေရာများ ၁ ၄၀။ ငါးဆယ်ပေးပါ
၄၁။စိုင်းစိုင်း-အမြဲတမ်းတောဂေါ်လီ ၅၁။ ထူးအိမ်သင်(မြို့ပြလရောင်) ၆၁။ ထူးအိမ်သင်(အတ္တပုံဆောင်ခဲများ) ၇၁။ ပြည်လမ်းဆုံ
၄၂။ဆင်ပေါက်-အကြည့်တစ်ချက် ၅၂။ ထူးအိမ်သင်(အရင်အတိုင်း) ၆၂။ထူးအိမ်သင်(ခိုင်မြဲသောသစ္စာဖြင့်) ၇၂။ ပုရွက်ဆိတ် - Hnan kaung lay ainwayoo pone pyin
၄၃။ဆင်ပေါက်-အကြည့်တစ်ချက် ၅၃။ ထူးအိမ်သင်(Green Dates) ၆၃။ထူးအိမ်သင်(သက်ငြိမ်) ၇၃။ ပုရွက်ဆိတ်-ပထမ ဒုတိယ တတိယ
၄၄။ထူးအယ်လင်း+မီး(ဆန္ဒ) ၅၄။ ထူးအိမ်သင်(တစ်နေ့စာအလွဲများ) ၆၄။ထူးအိမ်သင်(မှော်ဆရာအိမ်မက်) ၇၄။ ပုရွက်ဆိတ်-ရောင်စုံချောကလက်
၄၅။ဆုန်သင်းပါ ၅၅။ ထူးအိမ်သင်(၀င်ရိုးစွန်း) ၆၅။ ထူးအယ်လင်း(အိမ်ဂျယ်တယော) ၇၅။ ပွဲတော် ၁
၄၆။ဆုံနိုင်ခွင့် ၅၆။ ထူးအိမ်သင်(Unplugged) ၆၆။ ဒိုးလုံး( Best Songs) ၇၆။ ပွဲတော် ၂
၄၇။တမ်းတဖေါ် ၅၇။ ထူးအိမ်သင်(Tears on the hour) ၆၇။ ဒိုးလုံး( Tit York Thawl Chit Thu) ၇၇။ ဗဒင်အမှတ်တရ
၄၈။ထူးအိမ်သင်(အမှတ်တရသီချင်းများ) ၅၈။ ထူးအိမ်သင်(စကားလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင်) ၆၈။ ဒိုးလုံး( first album) ၇၈။ ဘိုဖြူ-ခေမရည
၄၉။ထူးအိမ်သင်(အမေ) ၅၉။ ထူးအိမ်သင်(With Love) ၆၉။ဒိုးလုံး(all selections) ၇၉။ ဘိုဘို+ညီပုလေး
၅၀။ထူးအိမ်သင်(အကြင်နာအိမ်မက်) ၆၀။ ထူးအိမ်သင်(The Last Album) ၇၀။ နတ်သမီး ၈၀။ ဘိုဘို-Best Songs
၈၁။ မင်းအတွက်-Rock ၉၁။ မျိုးကျော့မြိုင် - Virus-3 ၁၀၁။ လှိုင်ဦးမော်(unknown) ၁၁၁။ အငဲ-၀ိညဉ်များနှင့်ကခုန်ခြင်း
၈၂။ မင်းပေးတဲ့ကမ္ဘာ ၉၂။ အချစ်မရှိသောနေ့စွဲများ(လူစုံ) ၁၀၂။ လှိုင်ဦးမော်-အလှပြင်ထားပါ ၁၁၂။ အငဲ-Unknown Album
၈၃။ မဒီ-One Lady Show ၉၃။ မျိုးကျော့မြိုင်(အချစ်သီချင်းပါစီးရီး) ၁၀၃။ သင်္ကြန်မိုး ၁၁၃။ အငဲ-Unknown Album 2
၈၄။ မှားတဲ့အခါလည်းမှားပေမှာပေါ့ ၉၄။ မျိုးကျော့မြိုင်+ကဗျာဘွဲ့မှူး ၁၀၄။ သီချင်းချစ်သူ ၁၁၄။ အငဲ-Unplugged
၈၅။ မျိုးကြီး-ဆန့်ကျင်ဘက် ၉၅။ မျိုးကျော့မြိုင်+ဒိုးလုံး-စားသုံးကြည့် ၁၀၅။ သတင်းစာ(sample 5) ၁၁၅။ အငဲ-ခုနစ်ထွေအက
၈၆။ မျိုးကြီး-နိတ်စဓူဝ ၉၆။ မျိုးကျော့မြိုင်-ကျွန်တော့နာမည်မျိုးကျော့မြိုင် ၁၀၆။ သီအိုရီ ၁၁၆။ အငဲ-စိတ်ရွက်လှေ
၈၇။ မျိုးကြီး-အခမ်းနားဆုံး ၉၇။ ရှင်ဖုန်း-ရင်ခုန်မိသူ ၁၀၇။ ဟန်ထွန်း - Dream Machine ၁၁၇။ အငဲ-ဆာဟာရ
၈၈။ မျိုးကြီး-အပြန်လမ်း ၉၈။ လမ်းဆုံ ၁၀၈။ ဟယ်ရီလင်း - One Planet Man ၁၁၈။ အငဲ-ကိုး
၈၉။ မျိုးကြီး-ကျောက်စာများ ၉၉။ လွှမ်းမိုးသီချင်းများ(၆၂ပုဒ်) ၁၀၉။ဟယ်ရီလင်း - unknown ၁၁၉။ အီတိုး-မင်းရှိရာ
၉၀။ မျိုးကြီး-လေပြေ ၁၀၀။ လှိုင်ဦးမော် - No-2 Album ၁၁၀။ဟယ်ရီလင်းရဲ့ဟယ်ရီလင်း ၁၂၀။ အဖြူရောင်ပုံရိပ်
၁၂၁။ အယ်လ်နောင်း-ခိုင်မြဲခြင်း ၁၃၁။ ဇော်ဝင်းထွဋ်-ဆေးဆိုးပန်းရိုက်မျက်နှာ ၁၄၁။ လေးဖြူ+အငဲ+မျိုးကြီး-ရာစုသစ်
၁၂၂။ အယ်လ်နောင်း-မင်းရှိမှ ၁၃၂။ ဇော်ပိုင်+ချောစုခင် ၁၄၂။ လေးဖြူ-New World Songs
၁၂၃။ အယ်လ်နောင်း-မီးအိမ်ရှင် ၁၃၃။ ဇော်ပိုင်-အမိန့် ၁၄၃။ လေးဖြူ-ကန္တာရလမင်း
၁၂၄။ အယ်လ်နောင်း-သီချင်းသစ်များ ၁၃၄။ တေးစပ်တဲ့ည ၁၄၄။ လေးဖြူ-ကျိန်စာ
၁၂၅။ အယ်လ်နောင်း-အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေ ၁၃၅။ နောနော်-အတိုင်းအဆမရှိ ၁၄၅။ လေးဖြူ-ခဏလေးများ
၁၂၆။ အရာအားလုံးထက် ၁၃၆။ ရောချင်ရောမရောချင်နေ ၁၄၆။ လေးဖြူ-ပါဝါ
၁၂၇။ အဲလက်စ်-၁၉၉၆ ၁၃၇။ ရွှေထိုက်-လိုရင်းပြောပါ ၁၄၇။ လေးဖြူ-ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်
၁၂၈။ အလွမ်းရဲ့ည ၁ ၁၃၈။ လေးဖြူ - ပင်လယ်အော်သံ ၁၄၈။ လေးဖြူ-မံမီများ
၁၂၉ ဇော်ဝင်းထွဋ်(Unknow) ၁၃၉။ လေးဖြူ- Pray ၁၄၉။ လေးဖြူ-လိပ်ပြာ
၁၃၀။ ဇော်ဝင်းထွဋ်- Unplugged ၁၄၀။ လေးဖြူ+အငဲ+မျိုးကြီး-LMN ၁၅၀။ လေးဖြူ-အိမ်မက်ကဗျာ
ကိုဖိုးလပြည့်ရေ ကျွန်တော် သီချင်းအများကြီးတင်ပေးချင်တာ..ကျွန်တော်က သီချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် အရူးအမူးသမားဆိုတော့ ဒီလိုပို့စ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တာ မရရင်တော့ပြန်ပြောပေးပါခင်ဗျာ..အားလုံးကိုလေးစားလျက်...
တောင်းပြီ တောင်းပြီ :4:
ဘမ်နီဖြိုး အဲ့တာ နားထောင်ချင်တယ် .... ရှာတာလည်းတွေ့ဝူးပဲ .... လိုချင်တယ်ဗျာ .... ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ပုဒ်ချင်းတင်ပေးပါ ...
ifile ကနေ :4: ဒီက con က :2: မပြောတော့ပါဘူး .. ရှိသမျှလေးတင်ပေးပါ .. မရှိရင်လည်း ရှာပေးပါ ... တင်ဖြစ်အောင်တင်ပေးပါ ...
:4: ကျေးဇူးကြိုတင်ထားပြီ ဒါပဲ :P
အကိုမင်းနေက ဘန်နီဖြိုး ဘယ် သီချင်း လဲ ဗျ
ဘန်နီဖြိုး က သီချင်းတွေ အများ ကြီးပါ....
လို ချင်တဲ့ သီချင်းနာမည် နဲ့သီဆိုသူလေးပါ ပြောေးပပါနော် ..........
အဲပြီးတော့ကိုညီ ကို တစ်ခါတည်း တောင်းလိုက်မယ် နော်
ဟီဟီ ထူးအ်ိမ်သင်ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းလမ်းမများဆိုတာလေး ကို တင်ပေးပါလို့ .........ကိုငှက်ကြီးဆိုရင် အကုန် ကြိုက် တယ်
မြိုပြလရောင်တမ်းချင်း စီး ရီး က ဘယ် မှာ မှ ရှာမရတော့လို့ပါ....နော် အကို...တင်ပေးမယ်မဟုတ်လား .....
ဟီဟီ ထူးအ်ိမ်သင်ရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းလမ်းမများဆိုတာလေး ကို တင်ပေးပါလို့
မျှော်လင့်ခြင်းလမ်းမများ Central Upload (http://centralupload.com/files/11940_12fy9/102%20-%20Track.MP3)
ညီလေး အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောပါ.. ဒီသီချင်းလေးက အရမ်းကိုကောင်းတဲ့သီချင်းလေးပါ...
ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန် :4: မဖြစ်နိုင်ရင် ကောင်းတာလေးတွေပေါ့ :2:
ပြောရင်လည်းခံရမှာ နှစ်ပုဒ်ပဲ နားထောင်ဖူးသေးတယ် :P
ကျွန်တော် ဘန်နီဖြိုး သီချင်း ၄ ပုဒ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..သူတစ်ယောက်ပဲဆိုထားတာပါ..ပြီးမှ ထိန်ဝင်းနဲ့ပေါင်းဆိုထားတဲ့ခွေကို ထပ်ဖြည့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ..အဆင်ပြေပါစေ.
Bunny Phyo နဲ့ ထိန်ဝင်း ပေါင်းဆိုထားတဲ့ ခွေပါ..တစ်ခွေလုံး ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်..၁၆ ပုဒ်ပါ ပါတယ်ခင်ဗျာ..အောက်ကလင့်လေးတွေမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါခင်ဗျာ..ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ နောက်ကျသွားတာခွင့်လွှတ်ပါ..အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..
ဂျေမောင်မောင်ရဲ. သုညဒသမသုညမေတ္တာ သီချင်းလေးလိုချင်ပါတယ်
စန္ဒယားသံ.... တယောသံ..... စောင်းသံ တွေကို အဆိုမပါပဲနဲ့ သူ့ချည်းပဲ ဒါမှမဟုတ် တီးဝိုင်းတစ်ခုလုံး ပေါင်းစပ်ပြီးတီးထားတဲ့ သီချင်းခွေတွေတင်ပေးပါနော်... စန္ဒယားနဲ့ တယောဆိုရင် နာမည်ကြီး love songs တွေမကြားရတာ ကြာနေပြီမို့ပါ....မြန်မာ့စောင်းသံတွေနဲ့ မြန်မာ့တယောသံတွေကိုလည်း အင်တာနက်မှာရှာရတာ မရှိသလောက်ကိုရှားနေလို့ပါ.....
Credits &gt;&gt;&gt; www.padonma.com &amp; Original Uploaders